Ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ Angelina Jolie na Style Kapeeti - Ụdị
Ọmarịcha Angelina Jolie dị afọ 39 taa, m na-eme ememme site n'ịchịkọta ụfọdụ foto ebe ọ kacha yie nwa agbọghọ. Ejiji dị mma, ịmụmụ ọnụ ọchị, na ndị niile nọ ebe ahụ nwere obi ụtọ. Yabụ na agbanyeghị na nke ndị a sitere n'ememe ya n'ezie, ọ dabara ụkpụrụ m (obi ụtọ na ihe dị ịtụnanya) na nke ọ bụla.
Uwe a na-eme ọmarịcha ụbọchị ọmụmụ nwa nwanyị (sequins na sparkly) na-arụkwa ọrụ na Angelina kwa, onye họọrọ LBD a maka mbido Nnu laghachi na 2010.
ụlọ ahịa akwa maka ọnụ ọgụgụ curvy
Mana n'onwe m, ọ bụrụ na m bụ nwata nwanyị b-ụbọchị wee bụrụ kpakpando ihe nkiri mega, aga m efefe uwe oriri na nkwari maka ihe mara mma na ọkacha mma na ụgbọ oloko dị ogologo. Tinye nọmba chọkọletị a o yi na Cannes n'afọ 2011. Aga m ahụkwa mpaghara oriri na ọ involvingụ involvingụ nke gụnyere steepụ ka m wee nwee ọnọdụ dị mma maka igosi ya.
Ọ naghị adị ka nwanyị ike na -agbagharị ebe ọmarịcha maka nri abalị na -atọ ụtọ na ọnụ ọgụgụ dabara adaba nke ojii a dabara adaba?
Mana ọ bụrụ na amaara m Angelina (agbanyeghị, n'ezie, amaghị m), echere m na ọ ga -esoro ezinụlọ ya họrọ ụbọchị maka nri abalị mara mma n'afọ ọ bụla. Iberibe rụrụ arụ, dị mfe, na ojii yiri ka ọ na-eme ka mbinye aka ya na-abụghị ọrụ, yabụ enwere m obi abụọ na ọ ga-agbanwe ya.
Ịkekọrịta ihe m na -eche bụ egwuregwu na Brad, ọ mara mma nke ukwuu, nke ahụ bụ ka m na -atụ anya ka ụmụ agbọghọ ụbọchị ọmụmụ niile nwee mmetụta. N'akụkụ ihu ọ joyụ dị n'ihu ya, ahụrụ m ogologo ahịrị nke bọtịnụ na -esi n'elu uwe ruo na nsọtụ ya.
Maka ihe ọzọ na uwe ụbọchị ọmụmụ, ọ nwere ike maa jijiji tux ọ yi na British Academy Film Awards nke afọ a.
Mana ka anyị kwuo eziokwu: Enwere ezigbo ọmarịcha Ange ga -ahọrọ uwe mwụda mara mma nke nwere mgbaji ụkwụ dị elu (ọ bụrụ na anyị na -ele ndekọ ndekọ ya). maka premiere nke Kung Fu Panda 2 nke ahụ yiri uwe mwụda nwere akwa dị elu na tee silk.
Nke a yiri ka ọ bụ akwa ọsụsọ kacha asọpụrụ chi dịtụrụla. N'uche m, emere ụbọchị ọmụmụ maka iyi ụdị iberibe ndị a nke ụwa a. N'akụkọ ndị ọzọ, anyị nwere ike mee ka ọ na -agwa Brad ka ọ na -agba izu, 'Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ, nwa bebi - ị bụ ihe ịtụnanya' na ntị ya?
Kedu ihe ga-abụ uwe gị maka ụbọchị ọmụmụ nwa agbọghọ? Onwere onye nọ ebe ahụ chọrọ iyi ihe nwere akwa dị elu dị ka Ange?
onye na -ehicha ntutu isi maka obere ntutu
ụdị ịkpa isi nwere ntutu mmadụ
ihe nkiri thriller kacha mma nke 2014
ole hydrafacials ka ịhụ nsonaazụ
na -eji pensụl emeju nku anya
kedu ka m ga -esi kwụsị ịkwa akwa